(MK-677 Powder) Ibutamoren Powder အသုံးပြုမှုသိကောင်းစရာများ | AASraw sarms အမှုန့်
/ဘ‌‌လော့ခ်/Ibutamoren , MK-677/(MK-677 Powder) Ibutamoren Powder အသုံးပြုမှုသိကောင်းစရာများ
အပေါ် Posted 01 / 05 / 2018 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် Ibutamoren, MK-677.
(MK-677 Powder) Ibutamoren Powder Powder အသုံးပြုမှုသိကောင်းစရာများ
1.What ရဲ့ (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder?2။ (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder ပင်မအကျိုးကျေးဇူးများ
3 ။ (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု MK-4 အမှုန့်ကိုရွေးချယ်ပါရန် 677.Why?
Ibutamoren သုံးပါရန် 5..How 6.What သောက်သုံးသောငါကိုယူသင့်သလော
7.Why ကြောင့်ကာယဗလဘို့အကြံပြုပါသလဲ 8.MK-677 Powder အသေးစိတ်:
အဆိုပါကုန်ကြမ်း Powder ၏အရည် MK-9 ကိုယူမှ 677.How? AASraw မှ 10. Genius MK-677 Powder
1.What''s ကို (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder?
(MK-677 Powder) Ibutamoren Powder အရိုးသိပ်သည်းဆ၊ သိမြင်မှုစွမ်းရည်၊ ခွန်အားနှင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုတို့ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည့်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်အားနည်းမှုနှင့်ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းချို့တဲ့မှုတို့ကိုစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
MK-677 လည်းအားကစားအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအစွန်းရဖို့ရန်အားကစားသမားများကအသုံးပြုသည်။ MK-677 ghrelin ၏သက်ရောက်မှုန်းမှာ, အ ghrelin အဲဒီ receptor မှချည်နှောင်။ ဤရွေ့ကားဆိုးကျိုးများပိုမိုအစာစားချင်စိတ်, ကြွက်သားထုထည်, အရိုးဓာတ်သတ္တုသိပ်သည်းဆ, angiogenesis, VEGF စကားရပ်, နှလုံး၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများနှင့်ဂလူးကို့စနှင့်စွမ်းအင် homeostasis ၏မော်ဂျူပါဝင်သည်။
Ibutamoren မကြာခဏသူ့ရဲ့ဟိုများအတွက်အွန်လိုင်းဖိုရမ်များအပေါ်ဆွေးနွေး ကြွက်သားဂုဏ်သတ္တိများ -building ။ ဒါဟာတန်ပြန်ကျော်ရရှိနိုင်ပါနှင့်သူတို့၏ကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏတိုးမြှင့်ဖို့လိုသူများအတွက်အသုံးပြုသောဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်ဤဒြပ်ပေါင်းများ၏လက်တွေ့လေ့လာမှုများအတော်လေးနည်းကြ၏။ အောက်ကစာသားထဲမှာကျနော်တို့ယခုအချိန်အထိ ibutamoren အကြောင်းကိုလူသိများသည်အဘယ်အရာကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။
Ibutamoren (စ ibutamoren mesylate သို့မဟုတ် MK-677 အဖြစ်လူသိများ), ကြီးထွားဟော်မုန်း (GH) ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအားပေးအားမြှောက်များနှင့်အင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအချက် 1 (IGF-1) တိုးပွားစေပါသည်။
Ibutamoren ဟော်မုန်း ghrelin ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုန်းမှာ, နှင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ ghrelin receptors (GHSR) ၏တဦးတည်းမှ binding အသုံးပြုပုံကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏတိုးပွားစေပါသည်။ activated GHSR ဦးနှောက်ကနေကြီးထွားဟော်မုန်းလွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်။
GHSR အစာစားချင်စိတ်, အပျော်အပါး, ခံစားချက်, ဇီဝဗေဒ rhythms, မှတ်ဉာဏ်နှင့်သိမှတ်ခံစားမှုထိန်းချုပ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ ibutamoren လည်းဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ နှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, ghrelin ကဲ့သို့ ibutamoren ကတိုးပွါး - သို့သော်ယခုအချိန်အထိ, လက်တွေ့လေ့လာမှုများသက်ရောက်မှု ibutamoren အစာစားချင်စိတ်ပေါ်ရှိပါတယ်မှသာဖော်ပြပါ။
ibutamoren အကြောင်းကိုတစ်ဦးကအကြီးအရာကထိုကဲ့သို့သော cortisol ကဲ့သို့သောအခြားဟော်မုန်းအတွက်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမတိုးနဲ့အတူကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏတိုးပွါးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ cortisol ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကဖိနှိပ်, အနာရောဂါငြိမ်းစရာအနာများနှင့်ချို့ယွင်းသင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဒီဟော်မုန်းတိုးမြှင်ရှိသည်များသောအားဖြင့်မကောင်းမင့်လျော့ကျစေပါတယ်။
2 ။ (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder ပင်မအကျိုးကျေးဇူးများ
MK-677 ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုအလားအလာကြည့်ရှုပါ။ ကြီးထွားဟော်မုန်းအိုမင်းနှင့်အတူငြင်းပယ်နှင့် MK-677 ဒီကျဆင်းမှု 1 reverse မှကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်သက်သေပြလျက်ရှိသည်။
ဤသည်အသက်ရှည်သုတေသနပြုရန်ဂန္ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဟော်မုန်း, neurotransmitters သို့မဟုတ်အခြားအချက်ပြအိုမင်းနှင့်အတူကျဆင်းသောအရာကိုအထဲကပုံ။ အဆင့်ဆင့် restore ပြန်လည်းအိုမင်းများ၏သက်ရောက်မှုများနောက်ကြောင်းပြန်လျှင် ဆက်လက်. ကြည့်ပါ။
ငါအိပ်စက်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းများအကြားဆက်ဆံရေးသုတေသနကြောင့်ငါပထမဦးဆုံး MK-677 စိတ်ဝင်စားဖြစ်လာခဲ့သည်။
ငါအကျိုးကျေးဇူးများ, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် (MK-677 အမှုန့်) Ibutamoren Powder ၏သောက်သုံးသောဆွေးနွေးခြင်းမပြုမီ, ကြီးထွားဟော်မုန်းကိုယ်တိုင်က back up နှင့်ဆွေးနွေးကြကုန်အံ့။
1) Ibutamoren ကြွက်သား Build ကူညီပေး
Ibutamoren မကြာခဏဆိုလိုသည်မှာပိုကြီးကြွက်သားဖန်တီးပိန်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုတိုးမြှင့်ဖို့တစ်ဦးဟိုဥစ္စာအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဒါဟာနှုတ်တက်ကြွဖြစ်ပြီးတစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်သာယူနိုင်ပါသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အခြားကြီးထွားဟော်မုန်း stimulators ကိုနှိုင်းယှဉ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖြစ်ကြသည်။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ibutamoren ကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏနှင့် IGF-1 တိုးပွားစေပါသည်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းများနှင့် IGF-1 နှစ်ဦးစလုံး, အလှည့်အတွက်, ကြွက်သားအစှမျးသတ်တိကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးမြှင့်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီလျှော့ချပေးပါတယ်။
ကျန်းမာအဝလွန်အမျိုးသားများအတွက်, ibutamoren နဲ့ Two-တစ်လကုသမှုပိန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုးလာနှင့်ယာယီ Basal ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်း (BMR) တိုးတက်လာခဲ့သည်။
2) Ibutamoren ကြွက်သားစွန့်ပစ် Reduce
အစားအစာ-ဆုံးရှုံးကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းခုနှစ်, ibutamoren ကြွက်သားပိန်စေနိုင်ကြောင်း, အစားအသောက်များတွင်-သွေးဆောင်ပရိုတိန်းအရှုံးကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။
တင်ပါးဆုံရိုးကျိုး, ibutamoren တိုးတက်လာသောသွားအမြန်နှုန်း, ကြွက်သားခွန်အားနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများလူနာနှင့်ရေတံခွန်၏နံပါတ်လျှော့ချ။
3) Ibutamoren အရိုးသိပ်သည်းဆကိုတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
ကြီးထွားမှုဟော်မုန်း (GH) သည်အရိုးလည်ပတ်မှုကိုတိုးစေပြီးနောက်ဆုံးတွင်အရိုးသိပ်သည်းဆကိုတိုးပွားစေသည်။ သို့သော်ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းဖြင့်ကုသသောလူနာများတွင်လည်ပတ်နှုန်းတိုးလာခြင်းကြောင့်အရိုးသိပ်သည်းဆသည်အစပိုင်းတွင်မတိုးမီလျော့နည်းနိုင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်အရိုးသိပ်သည်းဆတိုးလာခြင်းကိုကြည့်ရှုရန်အချိန် (> ၁ နှစ်) ကြာသည်။
ကျန်းမာအဝလွန်အထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းခုနှစ်, ibutamoren အရိုးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
osteocalcin ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်သက်ကြီးရွယ်အိုလူကြီးများအတွက်, ibutamoren, အရိုးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တစ်ဦးအမှတ်အသားအရိုးအဆောက်အဦတိုးတက်လာခဲ့သည်။
Post-သွေးဆုံးအမျိုးသမီးတွေမှာတော့ ibutamoren တိုးအရိုးအစွမ်းသတ္တိ, အရိုးပွရောဂါကာကွယ်တားဆီးကူညီပေးသည်ထားတဲ့အရိုးဓာတ်သတ္တုသိပ်သည်းဆ, တိုးတက်လာခဲ့သည်။
4) Ibutamoren အိပ်စက်ခြင်းကိုပိုကောင်းစေ
လေ့လာမှုတစ်ခုနှစ်ခုလုံးကိုအငယ်နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများဘာသာရပ်များအတွက် ibutamoren တိုးတက်လာသောအိပ်ပျော်ခြင်းအရည်အသွေးနှင့် REM (လျင်မြန်သောမျက်စိလှုပ်ရှားမှု) အိပ်ပျော်ခြင်းကြာချိန်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
5) Ibutamoren အံတုနေကြအိုမင်းခြင်းနှင့်အသက်ရှည်တိုးပေးရန်နိုင်ပါစေ
ကြီးထွားဟော်မုန်း (GH) Secret နှင့်ကြွက်သားထုထည်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အပျိုဖော်ဝင်စကနေနှစ်ဦးစလုံးကျဆင်း။
သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့နေ့စဉ် ibutamoren လေးနက်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုမရှိဘဲကျန်းမာနုပျိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့အား GH နှင့် IGF-1 အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ IGF-1 အသက်ရှည်အပေါ်အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့လူသိများသည်။
အခြားလေ့လာမှုမှာတော့ ibutamoren အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်းပရိုဖိုင်းကို rejuvenated ။
6) Ibutamoren မေ ရှိ Nootropic အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
က nootropic သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရသော ghrelin အဲဒီ receptor အပေါ်ပြုမူသောကွောငျ့အချို့လူများကတစ် nootropic အဖြစ် ibutamoren ကိုအသုံးပြုပါ။ သငျသညျ ghrelin ပေါ်တွင် post ကိုတွင်ဤဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုပိုမိုဖတျရှုနိုငျပါသညျ။ သိပ္ပံနှင့် ibutamoren သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုမည်သို့လျှင်သေးလေ့လာဖို့, သို့သော်, ဖြစ်ပါတယ်။
ibutamoren ဦးနှောက် function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်နိုငျသောအားဖြင့်နှစ်ဦးကိုသွယ်ဝိုက်ယန္တရားများ:
Ibutamoren မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူမှုတိုးတက်လာဖို့လူသိများသော IGF-1, တိုးပွားစေပါသည်။
Ibutamoren လည်း REM sleep ကိုကြာချိန်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းရဲ့အရည်အသွေးတိုးပွားစေပါသည်။ ငါတို့သည်အိပ်ပျော်ခြင်းကောင်းသောမှတ်ဥာဏ် function ကိုများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်ကိုငါသိ၏။
လေ့လာမှုတစ်ခုအနိမ့် IGF-1 နှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏အသင်းအဖွဲ့မေးခွန်းထုတ်နှင့် ibutamoren အကူအညီနဲ့၏ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိ။ သို့သော်ဤလေ့လာမှု၌, ibutamoren လူသားများတွင်အယ်လ်ဇိုင်းမား၏တိုးတက်မှုနှေးကွေးမှာထိရောက်မှုရှိခဲ့သည်။
7) Ibutamoren ကြီးထွားဟော်မုန်း Deficiency ကုသခြင်းအတွက်ကြိုးဖြစ်ပါသည်
Ibutamoren, ကြီးထွားဟော်မုန်းတိုးမြှင့် IGF-1 နှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းချို့တဲ့နှင့်အတူသားသမီးများအတွက် IGFBP-3 အဆင့်ဆင့်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်ဤဆိုးကျိုးများ, ဂလူးကို့စ prolactin ၏ပြင်းအားပြောင်းလဲနေတဲ့မပါဘဲအောင်မြင်နေကြတယ်, triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), thyrotropin, cortisol သို့မဟုတ်အင်ဆူလင်။
ပြင်းထန်စွာ GH-လစ်လပ်ယောက်ျားအတွက်, ibutamoren မျှသိသာ cortisol အတွက်အပြောင်းအလဲ PRL နှင့်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းပမာဏနှင့်အတူ, IGF-1 နှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်အင်ဆူလင်နှင့်ဂလူးကို့စတိုးပွားလာခဲ့သည်။
8) Ibutamoren အနာကျက်ခြင်းနှင့်တစ်ရှူးပွနျလညျနှင့်အတူကိုကူညီပါနိုင်ပါစေ
ibutamoren သည်ဤအတူကူညီစေခြင်းငှါဤမျှကြီးထွားဟော်မုန်း, တစ်သျှူးသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာအနာတိုးပွားစေပါသည်။
အဲဒီမှာအထောက်အကူဖြစ်ခြင်း ibutamoren ၏တစ်ဦးချင်းစီအစီရင်ခံစာများသော်လည်း, သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများချို့တဲ့နေကြသည်။
9) Ibutamoren Hangover နှင့်အတူကိုကူညီပါနိုင်ပါစေ
ဒီတစ်ခုသို့ရာတွင်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့လူတွေက ibutamoren နှင့်အတူတင်နိုင် Hangover သတင်းပို့ပါ။
3 ။ (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
ibutamoren ၏အများဆုံးမကြာခဏဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအစာစားချင်စိတ်များနှင့်ယာယီတစ်ခုတိုး, ပျော့အောက်ပိုင်းစှနျးဖောနှင့်ကြွက်သားနာကျင်မှု (R) ဖြစ်ကြသည်။
အများအပြားကလေ့လာမှုများအသှေးကိုဂလူးကို့စများနှင့်အင်ဆူလင် Sensitivity ကို (R, R) ထဲမှာကျဆင်းခြင်းအစာရှောင်တစ်ခုတိုးသတင်းပို့ပါ။
ဤရွေ့ကားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဓိကအားဖြင့်ပူးတွဲနာကျင်မှုများနှင့်အင်ဆူလင်ကိုခုခံ (R, R) မွငျ့မားတိုးတကျမှုဟော်မုန်းပမာဏနှင့်အတူလူအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသူများ, ဆင်တူသည်။
အများဆုံးလေ့လာမှုများအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသတင်းပို့သော်လည်း, တဦးတည်းလေ့လာမှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေးနက်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များရပ်စဲခံခဲ့ရသည်။ တင်ပါးဆုံရိုးကျိုး, ibutamoren မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်, သွေးဂလူးကို့စနှင့် HbA1c နှင့်အတူသက်ကြီးရွယ်အိုလူနာ၌၎င်း, ပိတ်ဆို့မှုကိုနှလုံးပျက်ကွက် (R) ၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့သည်။ ပိတ်ဆို့မှုကိုနှလုံးပျက်ကွက်ကြုံနေရလူနာ 80 ကျော်တို့ကြိုတင်နှလုံးပျက်ကွက်တဲ့သမိုင်းရှိခဲ့တယ်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ဘိုဟိုက်ဒရိတ်စားသုံးမှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မှန်မှန် ibutamoren ယူပြီးစဉ်သွေးသကြားဓာတ်နဲ့အင်ဆူလင်အဆင့်ကိုစစျဆေးဖို့သမ္မာသတိရှိသောလိမ့်မည်။
တစ်ဦးအဖြစ် ဟိုသငျသညျကင်ဆာရှိပါက, ibutamoren ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းများနှင့် IGF-1 နှစ်ဦးစလုံးဟာကင်ဆာကြီးထွားမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။
MK-4 ရွေးချယ်နည်း 677.Why?
Ibutamoren Powder ခေါ် MK-677 Powder တစ်ကာယဗလထုတ်ကုန်အဖြစ်တန်ပြန်ကျော်ရောင်းချခဲ့ရခြင်းသို့မဟုတ်ယခုအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာသုတေသနဓာတုအဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ SARMs ဒါကြောင့် Mk-677 ကဲ့သို့သောစျေးကွက်ထားပြီးအသစ်ကကြီးမားတဲ့အရာတွေဟာသို့သော်သူကတကယ်တော့မတစ်ဦး SARM ၌တည်ရှိ၏။ SARMS လုပ်ရပ်အားဖြင့်သူတို့ကစတီရွိုက်ပြုပါတူညီတဲ့လမ်းတောင်းရာရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor modulator တွေကိုဖြစ်ကြ၏; သာ SARMs ရွေးချယ်ဖြစ်ကြပြီးမှသာတိကျသောအန်ဒရိုဂျင် receptor များပစ်မှတ်ထား။ SARMs ပတ်သက်. ကောင်းသောအရာကဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (ချက်ချင်းမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို) ရတဲ့မရှိဘဲပျော့ Steroid တစ်မျိုးယူပြီးနဲ့တူရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတော်လေးအန္တရာယ်ကင်းဖြစ်နဲ့နောက်ဆုံးမှာအားလုံးအတူတကွ steroids ကိုအစားထိုးနိုင်ပေမယ့် SARMs ၏အလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, အတော်လေးမသိရှိပါ။ ဒါက (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မဆိုအန်ဒရိုဂျင် receptor ပစ်မှတ်ထားမဟုတ်, ထို့ကြောင့်တစ်ဦး SARM မဟုတ်ပါဘူးပါဘူးဟုပြောသည်ခံရ။ ရိုးရှင်းစွာအထား, တကထက်ပိုကောင်းမယ့် SARMနှင့်အဲဒါကိုရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပြီးပြည့်စုံသောလူတန်းစားအတွက်ပါပဲ။
MK-677 သည်နှုတ်ဖြင့်တက်ကြွ။ ဇီဝရရှိနိုင်သည့်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်သည့်အပင် (GHRP-6) မှလုံးဝ ခွဲခြား၍ မရနိုင်သောသက်ရောက်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤသည်ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းသော Ghrelin ဟုလူသိများသောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသောဟော်မုန်း? Ghrelin အဆင့်များသည်အစားအစာများမတိုင်မီအမှန်ပင်မြင့်တက်နေပြီး Ghrelin နှင့် MK-677 တို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကသင့်အားအနည်းငယ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်စေသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ဇီဝဖြစ်စဉ်ထိတွေ့မှုအတွက်အရေးကြီးသော ဦး နှောက်ဒေသများစွာကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် Grelin Agonist (သို့မဟုတ် GHRP-6) အနေဖြင့် MK-677 သည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအာဟာရဖြစ်စေရန်၊ ကြီးထွားရန်၊ ပြုပြင်ရန်နှင့်တက်ကြွစေရန်ပြင်ဆင်ပေးသည့် receptors များကိုလှုံ့ဆော်သည်။ ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းပမာဏများပြားလာခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
ကြီးထွားဟော်မုန်းလူငယ်၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာစမ်းရေတွင်းဖြစ်၏။ ဒါဟာသင်ကအားကောင်းစေသည် leaner, ကျန်းမာသန်စွမ်း, အရေပြားနှင့်ဆံပင်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတောင်စမတ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းကျန်းမာလူကြီးများအတွက်သိမြင်မှု Enhancer အဖြစ်လေ့လာခဲ့ရသေး, ဖြစ်သော်လည်း, ကသိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုး၏အမြင့်ဆုံးနှုန်းကိုအတူဘဝကိုကာလအတွင်းမှာသဘာဝအတိုင်းအမြင့်မားဆုံးဖြစ်တော်မူ၏ ပို. ပင်အရေးကြီးကအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါရှိသူများအတွက်သိမှတ်ခံစားမှုတိုးတက်လာဖို့ကိုတွေ့ခဲ့သည်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွက်သားကြီးထွားခြင်းနှင့်ပွားဖို့အတှကျ signal ကိုပေး, ခြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကဟော်မုန်းဖြစ်၏ ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်ခိုင်ခံ့စေဖို့ပိုပြီးကြွက်သားဆဲလ်တွေကိုဖန်ဆင်း၏။
ကြွက်သားကြီးထွားမှုနှင့်အဆီဆုံးရှုံးမှုသည် MK-677 ကိုစိတ်ဝင်စားသောလူအများစုအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ အရေပြားနှင့်ဆံပင်ကောင်းခြင်းသည်မည်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းထိခိုက်နာကျင်စေခြင်းမရှိသော်လည်းအမှန်တကယ်မှာ MK-677 သည်အစွမ်းထက်ကြီးထွားစေသောဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၂၄ နာရီဝက်ဝက်သက်တမ်းရှိပြီး၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတက်ကြွစေသည်။ MK-24 သည်ဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်သည့်ဟော်မုန်းအများစုနှင့်မတူဘဲ cortisol အဆင့်ကိုမတိုးစေပါ။
Ibutamoren စျေးကွက်အပေါ်သြဇာအာဏာအရှိဆုံးနှင့်အသုံးဝင်သော SARMS တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟူသောဝေါဟာရကိုအကျွမ်းတဝင်သူတို့အားမပေးဘို့, SARMs ရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor modulator တွေကိုဖြစ်ကြသည်။ ယင်းဆေးဝါးများကြွက်သားအတွင်းရှိအန်ဒရိုဂျင် receptor များနှင့်အတူသာထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ကြသည်။ စတီရွိုက်အရိုး, အသားအရေနှင့်ပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါထဲမှာအန်ဒရိုဂျင် receptor များနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစတီရွိုက်ထက်ပိုကောင်းတဲ့သူတို့ကိုအလွန်အကျိုးရှိသောနှင့်အချို့သောကိစ္စများတွင်စေသည်။ SARMs များသောအားဖြင့်မည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြုံတွေ့ရခြင်းမရှိဘဲသုံးနိုငျသော်လည်းဤအမျိုးမျိုးသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ စံထိုးဆေး testosterone ဟော်မုန်းအတွက်အချိုး 10 ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း, 1: 1 ဤသည်ကို select အန်ဒရိုဂျင်အချိုးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 ၎င်းတို့၏ဟိုစေသည်။ ထိုကြောင့် SARMs ၏ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို gynecomastia, ဖောင်း, သွေးတိုးအဖြစ်အန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲပိုကောင်းတဲ့ဟိုတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်နိုင်ကြသည်
SARMs အပေါ်သို့ထိ မိ. လဲသောလူတူ OstarineLGD 4033 (သို့) Ligandrol (YK11) တွေဟာယေဘုယျအားဖြင့်သံသယ ၀ င်ကြတယ်။ ကောင်းပြီ၊ သင့်ကိုယ်သင်စစ်ဆေးရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့မဟုတ်သူတို့၏ထိရောက်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်မရေမတွက်နိုင်သောထောက်ခံစာများဖြင့်ဖိုရမ်များကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာ SARMs များသည်ပုံမှန် anabolic steroids ကဲ့သို့အစွမ်းထက်ခြင်းမရှိပါ။ သင်ဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်နဂါးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်၊ အစွမ်းထက်ဆုံးစတီးရွိုက်ဆေးတွေကိုသုံးပါ Anadrol 50, Dianabol, Deca Durabolin, Trenbolone, etc အဲဒီတစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်နဂါးသို့သငျသညျကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် SARMs အရည်အသွေးမြင့်ရဖို့ရန်ရှာနေသူများတစ်အတော်လေးသဘာဝအလမ်းအတွက်ပိန်ကြွက်သားထုထည်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ တဦးတည်းတဦးတည်းသံသရာ (များသောအားဖြင့် 10-15 ရက်သတ္တပတ်) ၏ကိစ္စအတွင်းပိန်ကြွက်သားများ 4-5 ပေါင်ရဖို့ရန်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ပို. ပင်အထင်ကြီးနေသောဖြတ်တောက်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
ဤကဏ္ဍတွင် Ibutamoren ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့၌သငျနားလညျဖို့အတှကျနိုင်ရန်အတွက်ပဲသေးငယ်တဲ့မိတ်ဆက်စကားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ဒီဒြပ်ပေါင်းများအမှန်တကယ်အထူးဖြစ်ပါတယ်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လမ်းအတွက်စံ SARMs ထံမှထွက်ရပ်။
Ibutamoren သုံးပါရန် 5.How
MK-677 ကိုသုံးရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးလွယ်ကူပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်နှုတ်ဖြင့်ဖြည့်စွက်။ ရှုပ်ထွေးသော protocol များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းကိုကြာချိန် ၁၀ ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်သည်။ အလယ်အလတ်နေ့စဉ်ဆေးပမာဏမှာ ၂၅ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ အချို့သောအတွေ့အကြုံရှိဓာတ်လှေကားများသည်ဆေးများကို ၅၀ မီလီဂရမ်နှင့်အထက်အသုံးပြုသည်။ သင်သည်ဖြည့်စွက်စာကိုပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုပါက၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။ သံသရာကာလအတွင်းဆေးထိုးချိန်ညှိလည်းခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်လက်ရှိသောက်နေသည့်ဆေးသည်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များကိုရရှိရန်မလုံလောက်ဟုသင်ထင်လျှင်၎င်းသည်အနည်းငယ်တိုး။ ၎င်းသည်ပိုမိုအားကောင်းသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ နှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်, သင်သည်နိမ့်သောက်သုံးသောအားဖြင့်တူညီသောရလဒ်များကိုရနိုင်။ လူတိုင်းကကွဲပြားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပုံမှန် ၂၅ မီလီဂရမ်ကိုနေ့စဉ်ဆေးသောက်တဲ့သူအများစုနဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။
သင်ကာယဗလစက်ဝိုင်းပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်လျှင်, သင်များစွာသောလူ Ibutamoren ပေါင်းစပ်ပြီးနှင့်အတူအောင်မြင်မှုရှိခဲ့ကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မည်, Candarine နှင့် Andarine။ တွဲသုံး, ဤထုတ်ကုန်တို့သည်ကြီးစွာသောဖြတ်တောက်ခြင်း stack ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပေါင်းစပ်ဤသုံးပါးဖြည့်စွက်၏တစ်ဦးကအစွမ်းထက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာ 10 ရက်သတ္တပတ်ကြာရှည်လိမ့်မယ်။ သငျသညျ Ibutamoren ၏ 25 မီလီဂရမ်၏နေ့စဉ် 20 မီလီဂရမ်ယူလို Cardarine နှင့် 25 Andarine ၏ MG ။ ဒါဟာပိုမိုအဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်တစ်သံသရာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အေးစက်, သွေးကြောနှင့်ဆုကိုတစ်ပြိုင်ပွဲကိုခံထိုက်သောအဆင့်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပါပဲ။
677 MGS-25 MGS: MK-50 သောက်သုံးသောအကြံပြု
တချို့က MK-677 လေ့လာမှုကပါးစပ်ဖြစ်ပါတယ်အခါအကြံပြု MK-677 သောက်သုံးသော 25 MGS-50 MGS ဖြစ်ပါတယ်ပြသထားတယ်။
MK-677 ၂၅ မီလီဂရမ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုကြောင့် ၆ ပတ်အတွင်းသွေးရည်ကြည် IGF-25 အဆင့် ၆၀.၁% တိုးလာပြီး ၁၂ လမှာ ၇၂.၉% တိုးလာသည်။ ရောနှောထားသောသက်ရောက်မှုပုံစံများတွင်ကုသမှု၊ အချိန် (လ)၊ ကျပန်းအလွှာများ (အခြေခံ MMSE အမှတ်≤60.1 vs> 1) နှင့်ကုသမှုအချိန်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတို့တွင် CIBIC-plus ရှိကုသမှုအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ သို့မဟုတ်6လကျော် ADAS-Cog, ADCS-ADL သို့မဟုတ် CDR-sob ရမှတ်များပေါ်တွင်အခြေခံရမှတ်များမှယုတ်လျော့ခြင်း။
အနည်းဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုအကြံပြုကြောင်းတစ်နေ့လျှင်အသုံးအများဆုံးအသုံးအများဆုံးထိုးတစ်နေ့လျှင် 25 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျထုတ်ကုန်5ကနေအထိဖြစ်စေအမှုန့်သို့မဟုတ်အရည်ပုံစံရောင်းချကြောင်းတွေ့လိမ့်မည် 1000 မီလီဂရမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတက် MG ။ အစိုင်အခဲအမှုန့်ပုံစံနှင့်အတူ, သင်ပိုမိုဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့ဆေးညွှန်းတက်ကိုဝေနှင့်အကြံပြု 25 နေ့စဉ်သောက်သုံးသော mg သို့သူတို့ကိုငါဖြိုဖျက်နိုင်။ ဤသည်ကိုလည်း, သင်ဆေးလုံး form မှာလာသောအခြားထုတ်ကုန်များနှိုင်းယှဉ်ပိုက်ဆံကယ်တင်ကူညီဖို့ပိုပြီးစျေးကြီးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒါကြောင့်အလွယ်တကူဆေးညွှန်းကိုဖြိုများ၏အဆင်ပြေမပေးပါဘူးပါလိမ့်မယ်။
Mk 677 Ibutamoren ၏ဝက်ဘဝ 24 နာရီကတည်းကတစ်နေ့တစ်ကြိမ်သင့်ရဲ့ထိုးတာကိုဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်။ လူအတော်များများကနဦးကြီးထွားဟော်မုန်းပဲမျိုးစုံအချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားမိစေရန်အလားအလာရှိသည်ကြောင့်သင်အိပ်ရာမယ့်ရှေ့၌သင်တို့ထိုးယူကြောင်းအကြံပြုပါသည်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏသင်နိုးထတဲ့အခါသင် lethargic မခံစားရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင်ကအိပ်ရာဝင်ချိန်ရှေ့၌သင်တို့ထိုးယူကြောင်းအကြံပြုသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောအရည်အသွေးမြင့်ကြီးထွားဟော်မုန်း၏ဘုံအကျိုးသက်ရောက်သည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့သံသရာကြာချိန်စီစဉ်ချင်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးလုံးဝကိုသင်မှတက်သည်။ တချို့ကတစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့တစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုများအတွက်ဖြည့်စွက်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏လက္ခဏာမပြသပြီဟုအွန်လိုင်းအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။ ရလဒ်အနေနဲ့အဲဒီမှာကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောဘေးကင်းလုံခြုံသံသရာအရှည်ရှိသည်ဖို့စရာအကြောင်းမရှိသည်နှင့်သင် run နိုင်ပါတယ် Mk 677 Ibutamoren နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်သင်၏ pituitary gland ၏သဘာဝအ GH output ကိုသို့မဟုတ် desensitization စိုးရိမ်ရန်မလိုဘဲချင်သည်။ သတိထားနေသောသူတို့အဘို့, သင်တို့ပတ်လည် 12 ရက်သတ္တပတ်ရန်သင့်သံသရာအရှည်ထားနိုင်သည်ပေမယ့်တကယ်အချိန်ကြာမြင့်စွာ Duration အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ သူတို့အများကြီးသောထုတ်ကုန်ချစ်သောကြောင့်လူအတော်များများပယ်လာခဲ့ပါဘူး။
ကာယဗလအမြဲသူတို့ကိုပိုပြီးကြွက်သားရဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီနိုင်သည်ကိုလာမယ့်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များအတွက်ရှာဖွေနေပါသည်။ ထုတ်ကုန်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အားလုံးအကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုအမျိုးအစားများကိုတောင်းဆိုကြောင်းထွက်အဲဒီမှာရှိပါတယ်။ သို့သော်ထိုထုတ်ကုန်များစွာ၏အလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလူအများစုကိုရှောင်ရှားချင်ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ဤထုတ်ကုန်နှင့်အတူအခြားကျန်းမာရေး-related ပြဿနာများကိုမကြာခဏပါဝင်သည်:
- High blood pressure သွေးတိုး
ဒါဟာသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာခဲ့ခဲ့ပြီးဓာတ်ခွဲခန်းထပ်ခါထပ်ခါစမ်းသပ်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Mk 677 Ibutamoren ကစားသို့ကြွလာနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ဤမျှလောက်များစွာသောလေ့လာမှုတွေနှင့်စမ်းသပ်မှုပြီးနောက်ရလဒ်များကို Mk 677 ကာယဗလအဘို့အထွက်ရှိအရှိဆုံးစံပြဖြည့်စွက်၏တဦးတည်းဖြစ်ဖို့သက်သေပြကြောင်းပြသကြပြီ အဖြစ်အစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပါဝငျကွောငျးကိုအခြားလှုပ်ရှားမှု။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်စေမည်မဟုတ်သောကွောငျ့ Mk 677 Ibutamoren လည်းကာယဗလများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် testosterone ဟော်မုန်း မှာအားလုံးအပျက်သဘောဆောင်သောလမ်းအတွက်မဆိုစွမ်းရည်အတွက်အဆင့်ဆင့်။ ဒီဖြည့်စွက်တာပြီးနောက်တစ်ရာခိုင်နှုန်းအဆင့်ဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်အခြားထုတ်ကုန်များအတွက်လိုအပ်သည့် aromatase inhibitor ယူရန်မလိုအပ်လည်းမရှိ။
ထို့အပြင်သင်ပါးစပ်ဖြင့်ထိုးသည့်အခါနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းပြင်းထန်သော GH သွေးကြောများမှတဆင့်ကြီးထွားစေသည့်ဟော်မုန်းနှင့် IGF-1 ထုတ်လွှတ်မှုများကိုချက်ချင်းတိုးမြှင့်စေလိမ့်မည်။ ဤအားကြီးသောပဲများကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြီးထွားစေသောဟော်မုန်းကိုထုတ်လွှတ်သည့် peptides များကိုဖန်တီးပေးသည်။ ကုသမှုအစား bodybuilders များသည်ကြီးထွားသောဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်သည့် peptides ကိုအကြိမ်များစွာထိုးသွင်းအသုံးပြုသည်။ Mk 24 Ibutamoren နှင့်အတူ၎င်းကိုနှုတ်ဖြင့်ခေါ်ယူပြီးလာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်းကြီးထွားစေသောဟော်မုန်း pulsations အားလုံးကိုတစ်ကြိမ်တည်းသောက်ခြင်းမှလွတ်မြောက်စေသည်။
ပါးစပ် bioavailability ၏ဤအဆင့်မြင့်နှင့်အတူသူကမဆိုထိုးမလိုအပ်ပါဘူးနှင့်တစ်ဦးတည်းသာထိုးအားလုံးအကျိုးကျေးဇူးများအသီးအနှံကိုရိတ်ရရန်လိုအပ်သည်။ မီ, ကာယဗလအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းဆေးများအတွက်ယူရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း HGH ထိုးခြင်းနှင့် GH peptide ထိုးယူလေ့ရှိတယ်။ သင်ခရီးသွားလာနေစဉ် HGH နှင့် peptides ပင်အအေးခန်းသိုလှောင်မှုလိုအပ်ကတည်းကသွားလာရန်ရှိသည်သည့်အခါဤအရာအဆင်မပြေအပြင်ဘယ်လောက်မသက်မသာစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်။
စားသုံးမိပြီးနောက်ကြောင့် 12 ပြင်းထန်သော GH pulsations ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ pituitary gland ကိုလှုံ့ဆျော။ peptides အနေဖြင့်တူညီသောအကျိုးကျေးဇူးအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, သင်တူညီတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအောင်မြင်ရန်တစ်နေ့လျှင် GHRP-6 ကအနည်းဆုံး 12 ကြိမ်သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ထိုးသွင်းဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်, ဒီဖြည့်စွက်ခရီးသွားဘို့လွယ်ကူစေသည်ထားတဲ့အခန်းအပူချိန်မှာသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဆက်တိုက်အသုံးပြုသောနေ့ရက်တိုင်းနှင့်အတူဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်များသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်များသို့ဆက်လက်တက်သွားလိမ့်မည်။ ဒီလိုဖြစ်လာတာနဲ့အမျှဒီအဆင့်မြင့်တာကသင့်ကိုယ်ထည်ကိုဘယ်လောက်များများထုပ်ပိုးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းသည်လျင်မြန်။ အလွန်သိသာပြီးခန္ဓာကိုယ်အဆီသည်ယခင်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူစွာအရည်ပျော်သွားသည်။ ၎င်းဆေးကိုသောက်နေသူတစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်းဖြည့်စွက်ဆေးကိုပထမဆုံးအပတ်အတွင်း ၁၀ ပေါင်အထိရနိုင်သည်။
အားကစားသမားအဖြစ်, အိပ်စက်ခြင်းရဲ့အရည်အသွေးပြုပြင်နှင့် recover ရန်သင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အဖြစ်နည်းတူအရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာကြောင့်တစ်ဦးတိုးလာကြီးထွားဟော်မုန်းထွက်ရှိမှုမှတိုးတက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်သိသိသာသာကြောင်းပိုကောင်းအိပ်စက်ခြင်းရဲ့အရည်အသွေးများကိုသက်သေပြလျက်ရှိသည်။ သငျသညျယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကာလအတွင်းအများကြီးပိုမိုအားကောင်းခံစားရပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်တို့သည်လည်းနိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်မြင်ရပါလိမ့်မည်သာ။ ရလဒ်အဖြစ်, သင်ဘယ်တော့မှမပြုမီနဲ့တူကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးရေးကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်နှင့်သင့်ခံနိုင်ရည်ကိုလည်းအလွန်တိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ လည်းကျန်းမာသန်စွမ်းအသားအရေနှင့်ဆံကေသာထည့်သွင်းရန်သင့်ရဲ့အသားအရေအတွက်တိုးတက်မှုရှိလိမ့်မည်။
8 ။ (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder အသေးစိတ်:
alias: Ibutamoren, MK-677, MK-0677, L163,191, L163191, Nutrobal
ပျော်ဝင်: ရေ DMSO, အီသနော, Propylene Glycol
အရည်ပျော်မှတ် - ၁၇၀ မှ ၁၇၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်မှု: 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်2နှစ်ပေါင်းမှာတစ်ဦးအေးမြခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်ဖွင့်လှစ်လေကြောင်းထိတွေ့မှု, စတိုးဆိုင် minimize
ဝက်ဘဝကို: 24 နာရီ
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: Off-အဖြူချောမှုန့်, hygroscopic, acrid အနံ့, acrid သတ္တုအရသာ beige မှ
အရည်ကိုယူမှ 9.How (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder ၏?
သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦး 25mg / ml 30ml အရည်ဖြေရှင်းချက်စေရန်:
ဖော်စပ်နှင့်အပူပေးကာ 30ml ပုလင်းတစ်ဖန် beaker ကိုဝယ်ခြင်းငှါ။ တိုင်း SARM အမှုန့်နှင့်အတူဤလုပ်နေပေမယ့်သင် / သင်လိုချင်သော ml ဘယ်လောက်မီလီဂရမ်ပေါ်အခြေခံပြီးလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လောက် MG ကိုတိုင်းတာ။
10.Genius ကိုဝယ်ပါ MK-677 အမှုန့်: မှ Ibutamoren အမှုန့်ကိုဝယ်ပါ AASraw
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်ကစုံစမ်းရေးကော်မရှင်စနစ်, သို့မဟုတ်အွန်လိုင်း skypecustomer ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် (CSR) ကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် 1.To ။
Tags: MK-677 Powder Buy, Ibutamoren Powder, MK-677 Powder
18402 Views စာ
GW 501516 / Cardarine အခြေခံသတင်းအချက်အလက်	အစာရှောင်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်: ကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်ဝတ်စုံအဘယျသို့သောသင်ပိုကောင်း?